आफ्नै छोरीसंग हनि’मुन मनाउनु गएको ज्वाईलाई सासुले नै भ’गाएपछि…. छोरीको आवस्था यस्तो ! – Sanchar Patrika
August 4, 2020 396
पछिल्लो समय विभिन्न अप्र’त्यासित घ’टनाहरुले मानिसलाई झ’कझ’काईरहेको छ। नाता सम्बन्धलाई एकातिर राखेर सम्बन्धको भूमिका निभाउन बिर्सिन थालेका छन मानिसहरु। कहिले छोराको बिहे हुनै लाग्दा सम्धिले सम्धिनी भगाउछन त कहिले सासु ज्वाई टिपेर फ’रार हुन्छिन।
लन्डनमा एक घ’टना घ’टेको छ। ३४ बर्षीया लरेनले पार्टनरसँग बिहे भएको खुसियालीमा आमालाई पनिसंगै हनिमुन लैजादा जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो ग’ल्ति’ साबित हुन पुगेको छ । हनिमुनको समयमा ज्वाई सासु बढी नै बोल्ने अनि कि’च्चिने गर्थे, जुन मलाई थोरै पनि मन पर्दैनथ्यो, तर मैले यो कुरा भने सपनामा पनि सोचेकी थिइनन की आफ्नै आमाले धो’का दिएर आफ्नै श्रीमानसँग विहे गर्छिन’ उनी भन्छिन् ।
बिवाह हुनुभन्दा अघि लिभिङ रिलेसनमा रहेका लरेन र उनका पार्टनर ह्वाइट पालले सन २००४ अगस्टमा विवाह गरे। विवाह धुमधामसँगै सम्पन्न भयो उनकी आमाले उनको विवाहमा १४ लाख खर्च गरेकी थिइन्। तर बिवाह भएको ८ हप्तामा पलले लरेनलाइ छो’डे।
पछि लरेनलाई थाहा भयो कि उनका पति पल आमा जुलीसँग बस्न थालेका रहेछन। २००५ मा जुलिले ज्वाईको सन्तानको जन्म दिईन र २००७ मा यी दूइले धुमधामसँग विवाह गरे। पति र आमाको विहेमा लरेन पनि सहभागी भएकी थिइन्। संसारमा सबैभन्दा बढी भरोसा र माया गर्ने मान्छेले नै अन्त्यमा धो’का दिएपछि लरेनले आफ्नी आमालाई संसारको सबैभन्दा घ’टिया आमाको दर्जा दिएकि छिन।
यी सब हुँदा पनि लरेनले दोस्रो विवाह त गरिन तर आमा र पुर्वपतिको विवाह भएको १३ बर्ष बितिसक्दा पनि मनको घा’उ र धो’केबाजीको घ’टना अझ ताजै रहेको छ।
NextBREAKING>>आजबाट लागुभयो नया नियम !वैदेशिक रोजगारी बाट र्फकने नेपालीहरु का लागी
कोरोनाको महामारीको यो समयमा काचो बेसार र दुध सेवन गर्नाले चमत्कारिक फाईदा मिल्ने, जानकारी सहित